Vanorwira Kodzero dzeRuzivo Vokurudzira Mapoka eNhau kuBuritsa Mashoko eChokwadi paSarudzo
Masangano anorwira kodzero yeruzivo ari kukurudzira masangano ezvenhau kuti abudise mashoko echokwadi munyaya dzesarudzo achiti izvi zvinobetsera vavhoti kuti vakwanise kuvhotera vatungamiriri vanozogona basa.
Vachitaura neStudio 7 mukuru weMedia Centre, VaEarnest Mudzengi vati vari kutambudzika zvakanyanya nekufambiswa kwemashoko enhema apo nyika yakatarisana nesarudzo dzema By-elections dziriko Mugovera.
VaMudzengi vanoti dambudziko guru riripo nderekuti vamwe vanofambisa mashoko vakaita zvekutapwa nevanhu vanoita zvemabhizimusi pamwe nevanhu vanoita zvematongerwo enyika, izvo zvinozoita kuti kuburitswa kwemashoko kuitwa mujekerere.
VaMudzengi vatiwo izvi zvinokonzera kuti vavhoti vaende kunovhota vasina ruzivo rwakakwana nezvevanhu vavanofanirwa kuvhotera.
Muzvare Michelle Duma Biriwasha vanoshanda nesangano re International Republican Institute muZimbabwe. Muzvare Biriwasha vatsigirawo vachiti apo vanhu vakatarisana nesarudzo kune kufamba kwemashoko emanyepo izvo zvoitawo kuti sangano ravo ritange zvirongwa zvekudzidzisa veruzhinji kupepeta mashoko kuona kuti ndeechokwadi here kana kuti kwete.
Muzvare Biriwasha vapa muenzaniso vachiti kune mavhidhiyo nemashoko ari kutenderedzwa ezvakaitika kare kana zvisiri zvechokwadi.
Muzvare Biriwasha vati mashoko ekunyepa anokanganisa vanhu munyaya dzekusarudza vatungamirira vavanoda, uye vakurudzira venhau nevanofambisa mashoko kuti vapepete mashoko vasati vaaisa pajekerere.
Mukuru weMedia Alliance of Zimbabwe, VaNigel Nyamutumbu vatiwo mashoko enhema apfumbira kusanganisira padandemutande reInternet. VaNyamutumbu vatiwo vari kukurudzira kuti vanhu vaparadzire mashoko echokwadi chete.
Zvichakadaro nyanzvi munyaya dzesarudzo dzinotiwo gadziriro yemaby-elections yanga ine zvimingamupinyu zvinosanganisira mhirizhonga, kusapiwa mikana yakafanana kwemapato ezvematongerwo enyika.
Sachigaro weZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vatiwo havana kufara nemikana yaipiwa mapato ezvematongerwo enyika nenhepfenyuro dzehurumende dzeterevhizheni nerhedhiyo sezvo bato rimwe chete, reZanu PF, riri iro raingopiwa mukana kwese vamwe vachiushaiswa.
Sarudzo dzemaby-elections dziriko neMugovera asi mapato ezvematongerwo enyika mazhinji anoti ave kutogadzirira sarudzo dza2023.